Fampitahana iPod faha-5, taranaka faha-6 ary iPhone 6 | Vaovao IPhone
Ny alarobia lasa teo dia nanolotra ny Apple Store an-tserasera i Apple taorian'ny ora fikojakojana nandritra ny ora maro mba hampidirina ao amin'ny katalaoginy ny manavao ireo mpilalao mozikao. Raha ny momba ny Shuffle sy ny Nano dia tsy nisy fanatsarana mihoatra ny loko vaovao, saingy tafiditra ao anatin'ny iPod fahenina kosa dia tafiditra ao izy ireo vaovao tena lehibe, toy ny 64-bit processeur na fakan-tsary 8 megapixel. Amin'ity lahatsoratra ity dia azonao atao ny mahita ny masontsivana rehetra momba ny iPod fahenina ary mampitaha azy ireo amin'ireo iPod sy iPhone 6.
1 iPod Touch taranaka faha-6
2 iPod Touch taranaka faha-5
iPod Touch taranaka faha-6
Refy: 4.86 ​​santimetatra / 2.31 santimetatra / 0.24 santimetatra
Lanja: 3.10 oz (88 grama)
Hafainganan'ny famantaranandro: 1.1GHz
Haben'ny efijery: 4 santimetatra
Fanapahan-kevitra: 1136 × 640 amin'ny 326 ppi misy 800: 1 mifanohitra
Aperture (main): ƒ / 2.4
Flash: LED tokana
NFC / Apple Pay: tsia
ID mikasika: Tsia
Loko: manga, volondavenona, volafotsy, mavokely, mena, volamena
Storage: 16/32/64 / 128GB
Vidiny: € 229 / € 279 / € 339 / € 449
iPod Touch taranaka faha-5
Hafainganan'ny famantaranandro: 1GHz
Fanapahan-kevitra: 1136 × 640 amin'ny 326 ppi
Loko: Mena, mavo, manga, volafotsy, mainty
Fitehirizana: 32 / 64GB
Vidiny: Tsy misy intsony
Refy: 5.44 santimetatra x 2.64 santimetatra x 0.27 santimetatra
Lanja: 4.55 oz (129 grama)
Hafainganan'ny famantaranandro: 1.4GHz
Haben'ny efijery: 4.7 santimetatra
Fanapahan-kevitra: 1334 × 750 amin'ny 326 ppi misy mifanohitra 1,400: 1
Aperture (main): ƒ / 2.2
Flash: LED Dual True Tone
NFC / Apple Pay: Eny
ID mikasika: Eny
Loko: Grey habakabaka, volafotsy, volamena
Fitehirizana: 16/64 / 128GB
Vidiny (maimaim-poana): € 699 / € 799 / € 899
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fantson'ny IPhone » iPhone 6 » Famaritana fampitahana eo amin'ny iPod faha-5, iPod faha-6 ary iPhone 6
ary avy eo???? tsy tokony hisy ireo entana ireo
Carlos J dia hoy izy:
Tsy misy olona mametraka basy amin'ny lohanao hamaky ilay lahatsoratra. Raha tsy tianao izany dia tsy mila mamaky azy akory ianao .. .. amin'ny hafa izay tia fitaovana, raha tianay ny mahita fampitahana teknika an'ireo vokatra.
Valiny tamin'i Carlos J
Mba hahitanao ny fampitahana ataonao ao amin'ny pejy Apple, dia tsy ilaina ny mankany amin'ireo pejy ireo mba tsy hametraka zavatra mahaliana anao, angamba tsy anisan'ireo mieritreritra be momba azy ianao, ka dia lasa nitsoaka ianao Eto
Valiny amin'i ILuisD
Ary angamba poakaty loatra ny fiainanao ka manokan-tena handaka vaovao izay tsy tianao. Tsy orana velively araka ny itian'ny besinimaro azy, raha tsy tianao ilay lahatsoratra dia mora toy ny tsy mamaky azy io (ary na dia kely aza, manome hevitra momba azy).
Rehefa mijanona tsy mampiseho famaritana modely tsy amidy intsony ny tranokala Apple, dia azonao atao avy eo ny mahatsapa fa mahasoa ilay lahatsoratra.
Hitako fa tsy mitombina ny maka tahaka sy mametaka ireo masontsivana
Eny, tiako ny mahita ireo toetra, satria mieritreritra aho fa ny pejy ofisialy dia tsy andiany fahadimy, ka aleoko mahita azy eto, ankoatr'izay afaka manome ny hevitrao ianao
Salvador Gomez dia hoy izy:
fanontaniana iray ny fampirantiana ny ipod faha-6 tavela amin'ny taranaka faha-5
Valiny tamin'i Salvador Gómez